Rody Dim's Page - Myanmar Network
Khon Kaen City, Northeast Thailand
Rody Dim's Likes
Rody Dim's Friends
Rody Dim's Discussions
For English or Burmese teacher
ကျွန်မသည် PhD ကျောင်းသူပါ။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကို ၂၀၀၁ ခုနစ်မှာ အာင်မြင်ခဲ.ပါတယ် ။ အောင်စာရင်းထွက်တဲ.နေ.ကနေ ခုထိ ဒီ English teacher and translator အလုပ်ကိုလုပ်လာတာ နှစ်ပေါင်းများစွာရှိပါပြီ ။…Continue
ယားတဲ့နေရာ ကုတ်ပေးပါ။ ယားတဲ့နေရာ ကုတ်ပါ။ (ခေါင်းစဉ်က ခုထိ စဉ်းစားမရ) စာအုပ်က မထွက်သေး ပြဿနာကတက်ပြီ။ သူများ ယားတာကို သွားကုတ်ဖို့ မဟုတ်ပါ။ ပြဿနာတွေ တက်နိုင်သည်။ သူယားသည့်နေရာ မှန်နေလည်း သိပ်မကောင်း၊…Continue
YA မှ လူငယ်တစ်ချို့ ဒလ မြို့သို့ သွားရောက်ပြီး ရေ ပျတ်လပ်သော ရပ်ကွက်များထံ သွား ရောက်၍ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုကို ၁၄ ရက်နေ့ မေလတွင် သွားရောက်ခဲ့သည်။ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်မှူးရုံးသို့ သွားရောက်ခဲ့ရာ ထို…Continue
Current Exodus Project
Started this discussion. Last reply by Rody Dim Apr 28, 2012. 1 Reply0Likes
လှိုင်သာယာမြို့နယ်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ အနောက်မြောက်အရပ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ လှိုင်သာယာမြို့နယ် တွင် ရပ်ကွက်ကြီး (၂၀) ရှိရာ ရပ်ကွက် တခုစီတိုင်း ကို အပိုင်(၇) ခုစီဖြင့် ပိုင်းခွဲ ထားပါသည်။ လွတ်မြောက်ရာ…Continue
Rody Dim has not received any gifts yet
Rody Dim's Page
At 19:46 on March 13, 2011, whiteheartlandvolunteer said…
we will do this voluntary work foralong-run.Please contact to our society. This group is you can see on the facebook.Whiteheartland volunteer@gmail.com
At 19:40 on March 13, 2011, whiteheartlandvolunteer said…
ဒီအဖွဲ့ဟာရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာရှိပါတယ်၊အခုဆက်သွယ်သူကတော့ ဒီအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ ဦးဇင်းဦးကုသလပါ၊ နေတာက ရွှေပြည်သာမှာပါပဲ၊ဦးဇင်းဆီဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးပြောကြရင်ကောင်းမယ်၊ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး လူချင်းတွေပြီးလိုအပ်တာဆွေးနွေးကြမလား။။ဖုန်းက (610661)ပါ၊ နေ့လည်ပိုင်းဆိုကျောင်းမှာ၇ှိပါတယ်၊
ဒီလကုန်ခါနီးလောက်မှာပဲ လှိုင်သာယာက အောင်ဇေယျာမင်းကျောင်းကိုလှူဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။။
ဖုန်းနဲ့ contact လုပ်စေချင်ပါတယ်၊သေသေချာချာဆွေးနွေးကြရအောင်ပါ။။။
At 16:06 on December 28, 2010, Soe Thiha said…
Long time no see... How are you?
At 13:58 on November 17, 2010, zawminlatt said…
you can invite my gmail adderss .so you can this zmlatt.9@gmail,com
At 11:10 on August 24, 2010, Soe Thiha said…
At 13:43 on July 15, 2010, Soe Thiha said…
At 12:21 on June 24, 2010, Soe Thiha said…
Glad to see u and hvanice day.